Ngilishintsha kanjani ikheli lami ku-Social Security igxathu negxathu | Ezezimali Zomnotho
Kunezikhathi lapho, ngasizathu simbe, kufanele ushintshe ikheli lakho. Lokho kufaka amaphepha amaningi, ngoba kufanele ushintshe ikheli ezindaweni eziningi: ku-DNI, kuma-invoice, ku-Social Security ... Futhi kwesinye isikhathi kungaba yinkinga uma ungazi ukuthi ungakwenza kanjani. Ngalesi sizathu, namhlanje sihlele ukuthi sisebenzisane kakhulu nawe ukuze ushintsho lwekheli ku-Social Security lungabi yinkinga (ngoba kuyinto, esivame ukukhohlwa ukuyiguqula futhi kungasho ukuthi basinika inhlawulo ungakwenzi).
Ngakho-ke, namhlanje sikhuluma ngakho ukuguqulwa kwekheli ku-Social Security okuthi, uma kwenzeka ungazi, kungenziwa ngezindlela ezahlukahlukene ezahlukahlukene.
1 Ukuguqulwa kwekheli ku-Social Security, kungani kufanele ukwenze?
2 Ukuguqulwa kwekheli ku-Social Security, kungenziwa kanjani?
2.1 Shintsha ikheli lakho Lokuphepha Komphakathi mathupha
2.2 Ukuguqulwa kwekheli online
2.3 Ungalishintsha ikheli lakho ngocingo?
Ukuguqulwa kwekheli ku-Social Security, kungani kufanele ukwenze?
Cabanga ukuthi unenkampani nokuthi uyitholile ekhelini elithile. Ngenhloso Yezokuphepha Komphakathi, ikuleyo ndawo, ngakho-ke bangaya kuyo ukuze bakunikeze izingcaphuno, noma benze isimanga sokuhlola.
Manje, kwenzekani uma inkampani ingekho lapho ifika? Kuthiwani uma ushintshe ikheli lakho futhi ungalazisanga ku-Social Security? Ungabhekana nenhlawulo ngokungavuseleli idatha yakho. Noma kukuncane, Unesibopho sokuthi yonke idatha i-Social Security enayo kufanele ivuselelwe.
Ngakho-ke, kubalulekile ukwazi ukuthi, uma unyakaza, shintsha ikheli lakho, njll. Kufanele futhi wazise Nokuvikeleka Komphakathi.
Ngenhlanhla, le nqubo ilula, futhi ingenziwa nangezindlela eziningi. Futhi cha, akubandakanyi osomabhizinisi noma izinkampani kuphela; abasebenzi kumele futhi bazi ngokwazisa izinguquko kudatha yabo yomuntu siqu.
Ukuguqulwa kwekheli ku-Social Security, kungenziwa kanjani?
Uma uzithola usesimweni osanda kushintsha ikheli lakho, phakathi kwezinqubo eziningi okufanele uzenze, Ukuphepha Komphakathi kungenye yazo.
Noma kunjalo, iqiniso ukuthi Unezindlela eziningana zokwazisa leli bhizinisi ngalolu shintsho. Sizophawula ngamunye wabo ngokuningiliziwe:
Shintsha ikheli lakho Lokuphepha Komphakathi mathupha
Ngaphambi kwalokho, lapho i-Intanethi yayingeyona into evamile emakhaya, ukwenza noma iyiphi inqubo ehlobene nokuPhepha Komphakathi kwakusho ukulahlekelwa usuku lonke ekuseni (ngethemba). Futhi bekufanele uye ehhovisi Lezokuphepha Komphakathi, uthathe inombolo bese uyilinda ukuthi ikuthinte.
Ukube ubungowokuqala, ngethemba ukuthi usheshe waqeda, kepha uma wephuzile ungalinda amahora ama-2-3 ngaphambi kokuthi bezokuhambela (kunjalo, lokhu kuncike edolobheni ohlala kulo).
Manje izinto azikashintshi kakhulu, futhi yize ungenza i-aphoyintimenti ukugwema ukubambezeleka, kungadingeka ukuthi ulinde kancane futhi ngeke bakuhambele ngesikhathi sakho.
Kodwa, Ingabe ikheli lingaguqulwa uqobo? Impendulo inguyebo. Ukuze wenze lokhu, udinga ukuhambisa uchungechunge lwemibhalo ukwenza lokhu:
Umbhalo TA1. Yidokhumende "esemthethweni" okufanele ubheke kuyo ibhokisi elithi "ukwahluka kwedatha", bese ubhala ikheli lakho elisha. Le dokhumenti kufanele isayinwe ngumnikazi uqobo.
I-DNI noma i-NIE. Sincoma ukuthi uhambe nakho konke okwangempela nekhophi yalo uma kungenzeka badinge ukukugcina. Enye indlela ukuthi bayazenzela.
Ukugunyazwa. Uma kwenzeka ungakwazi ukuya mathupha ukwenza ushintsho lwekheli ku-Social Security, omunye umuntu uvunyelwe ukungena endaweni yakho. Kodwa-ke, ukusivuma, kuyadingeka ukwethula ukugunyazwa okusayinwe ngumnikazi okukhomba umuntu omele lokho. Ngaphezu kwalokho, kufanele ulethe okulandelayo:
I-DNI noma i-NIE yomnikazi noma ofaka isicelo sokushintsha ikheli ku-Social Security. Kokubili okwangempela kanye nekhophi.
I-DNI noma i-NIE yomuntu omele wena, uhlala eseminyakeni esemthethweni. Kokubili okwangempela nokukopisha.
Ukuguqulwa kwekheli online
Inketho yesibili esinayo yokushintsha ikheli ku-Social Security nge-Intanethi. Le nqubo ingenziwa nganoma yisiphi isikhathi sosuku noma sebusuku ngoba ivulekile (okufanayo akwenzeki ngokwemodi yobuso nobuso elawulwa kuphela amahora wenkonzo yomsebenzisi)
Ukuze ukwenze online kufanele uye ikhasi elisemthethweni le-Social Security. Okokuqala, kufanele ukhumbule ukuthi udinga ukuba nesitifiketi sedijithali, igama lomsebenzisi + iphasiwedi, noma iphinikhodi yeCl @ ve. Uma ungenakho kwalokhu, kuzokwenzeka ukuthi ungakwenzi ngale ndlela.
Ngaphakathi kwekhasi elisemthethweni le-Social Security, kufanele uye eNdlunkulu ye-Elekthronikhi Yezokuphepha Komphakathi. Lapho, thola isigaba seCitizens.
Kuyo, kukholamu yesobunxele, uzobona i- "Affiliation and registration" futhi, uma uchofoza kuyo, phakathi kwezinketho ezikunikeza zona, yi- "change of address in Social Security".
Kufanele ukhethe indlela yokufinyelela le sevisi, okusho ukuthi, uma uzosebenzisa isitifiketi sedijithali, i-Cl @ ve noma igama lomsebenzisi + iphasiwedi. Uma usungene ngemvume, uzothola isikrini lapho waziswa khona ngokushintshwa kwekheli, nalapho ungashintsha khona ikheli ohlala kulo noma, uma kwenzeka uzisebenza, ikheli lalabo abazisebenzayo.
Kufanele shintsha konke onakho, kungaba ikhodi yeposi, idolobha, uhlobo lomgwaqo, igama lomgwaqo, inombolo, ibhulokhi, isiteji, phansi, umnyango ...
Yenza isheke lokugcina ukuze uqiniseke ukuthi yonke into iyahambisana bese uqhafaza ku-Accept.
Isinyathelo sokugcina kuzoba ngumyalezo ovela kwabezenhlalakahle lapho bekwazisa khona ukuthi ukuguqulwa kwekheli kwenziwe ngendlela egculisayo.
Ungalishintsha ikheli lakho ngocingo?
Njengoba wazi, ukukhuluma ne-Social Security onayo inikwe amandla inombolo yocingo, 901 502 050. Kodwa-ke, ukushintsha ikheli ngokwakho ngale foni akunakwenzeka.
Abakwenzayo ukukuthumelela ifomu lokubuyekeza idatha (nezincwadi zokuposa) ukuze uligcwalise bese ulithumela ngeposi ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa-ke, lokho kusho ukuthi ushintsho luzothatha isikhathi eside kakhulu kunokukwenza ngezinqubo zangaphambilini.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Izintela » Ngilishintsha kanjani ikheli lami ku-Social Security?
U-Ana Ruiz Molinero kusho
Angikwazi ukwenza ushintsho lwekheli enombolweni yocingo ekhonjisiwe. Ungakwenza kanjani ngaphandle kwephasiwedi, kuphela nge-DNI?
Phendula u-Ana Ruiz Molinero
Izinketho zezezimali, Shayela futhi ubeke